Amacebo okhetho lwezeMali, iSahlulo 1 | Ezezimali
Amaqhinga okhetho lwezezimali, Icandelo 1
Kwixesha elidlulileyo besithetha ngebhlog malunga Izinketho zemali. Zezinye zeendlela zotyalo-mali kunye / okanye intelekelelo ekhoyo kwimarike yemasheya. Zizixhobo ezithi kunokuba nzima kakhulu kwaye kunzima ukuyiqonda, ngakumbi abatyali mali abaqala nje ukusebenzisa olu didi lweeasethi. Esi sithuba senzelwe ukuba sisongezelelo esivela kokuqonda amacebo ahlukeneyo aqhele ukusetyenziswa kukhetho lwezezimali. Ngesi sizathu, ukuba awazi ukuba zisebenza njani okanye usenamathandabuzo, unokuba nomdla wokufunda kuqala ukuba zeziphi iimakethi onokukhetha kuzo. Kwaye ndiyayincoma kakhulu… kukho iintlobo ezi-2 zazo, iiCall, iiPuts kwaye zinokubakho zombini ukuthengwa nokuthengiswa. Umyalelo ongalunganga kwicala esingafuni mpazamo, unokukhokelela kwilahleko engapheliyo.
Nangona kunjalo, ukuba ufike apha, kwaye uzimisele ukuqhubeka nokungena kwiimarike ezikhethiweyo, ndiza kubonisa izicwangciso ezi-3 ngeendlela zokhetho apha ngezantsi. Ndiyathemba ukuba ungonwabela ezinye zazo njengoko ndenzayo. Ngoku kuxa izinto zinomdla ngokwenene, kwaye zinzima ngaxeshanye, kodwa ndiyathemba ukuba ungazisebenzisa. Amathuba ebekhona, kwaye aza kuba njalo. Ke akukho kungxama ukuba ufunde. Masiqalise!
1 Isicwangciso sokufowuna esiCwangcisiweyo
1.1 Imodi yokuphumeza
1.2 Amatyala okuphunyezwa ngaphambi kokuphela
2 Icebo lokutshata
3 Isicwangciso esiliqili
3.1 Umtya omde / Thenga
3.2 Umtya omfutshane / ukuthengiswa
Isicwangciso sokufowuna esiCwangcisiweyo
Isicwangciso soMnxeba esiCwangcisiweyo, esikwabizwa ngokuba yi-Covered Call ngeSpanish, siquka ukuthenga izabelo kunye nokuthengisa ukhetho lokufowuna kwizenzo ezifanayo. Eyona njongo iphambili ilandelwe kwesi sicwangciso-nkqubo ngokhetho kukuqokelelwa kwepremiyamu.
Inani elifanayo lezabelo ezikhoyo kwizabelo ezikhoyo kukhetho okanye iindlela ekujongwe ukuba zithengiswe kufuneka zithengwe. Umzekelo, ukuba uzimisele ukuthengisa iindlela ezi-2 zokufowuna kwaye nganye inezabelo ezili-100 ezisisiseko, eyona nto iya kuba kukuthenga izabelo ezingama-200 zelo xabiso. Esona sizathu siphambili kukuba xa umhla wokuphelelwa lixesha ufika, ukuba izabelo zingaphezulu kwexabiso lesitrayikhi sokhetho, kunokwenzeka ukuba iya kwenziwa. Xa ukhetho lwenziwe, umthengi uya kufuna kuthi njengabathengisi, izabelo ngexabiso ekuvunyelwene ngalo. Masibone yonke inkqubo ngomzekelo ongcono:
Sinesabelo esithengisa nge- € 20. Kuyavela ukuba sinezabelo ezingama-00 zale nkampani esithe sayithenga kutshanje (okanye kwakudala, inyani kukuba sinazo).
Sigqibe kwelokuba sithengise iindlela zokufowuna ezi-2 ngexabiso le-Strike lama-euro angama-21 ngeprimiyamu ye-0 ye-euro kunye nokukhula kwenyanga e-60.
Ukuba izabelo ziyehla. Kwimeko yokwehla kwexabiso lesabelo, ukhetho aluyi kwenziwa kuba alunangqondo. Kungcono ukuba bekunjalo, besinokuthengisa ngexabiso eliphezulu! Into eza kwenzeka ekuphelelweni lixesha kukuba ukhetho lokuthengisa iifowuni luya kuphela kwaye siza kuba neprimiyamu esiza kuyibuyisa. 0 x 60 = 200 euro iphumelele.
Ukuba izabelo ziyenyuka. Masicinge ukuba izabelo zifikelela kuma-euro angama-25, kwaye sinokhetho esizibophelele ngalo kwi-euro ezingama-21. Yilahleko ye-4 x 200 = 800 ye-euro. Nangona kunjalo, ukuba izabelo zithengiwe, siwufumene lo mehluko, ke akusayi kubakho mfuneko yokuyibuyisa, hayi ngokuthe ngqo. Ke xa usuku lokuphelelwa lixesha lufikile, ukhetho luya kwenziwa. Umvuzo wokugqibela ubuya kuba yi-20 ukuya kwi-21, i-1 euro kwisabelo ngasinye, kunye nepremiyamu ye-0 euro. Oko kukuthi, i-60 x 1 = i-euro ezingama-60.
Amatyala okuphunyezwa ngaphambi kokuphela
Ngaphakathi kwezicwangciso ezinokhetho lwezemali kukho iimeko apho ukhetho lunokwenziwa ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi. Oku kuhambelana nokuba ngaba baseMelika okanye baseYurophu. IYurophu zinokuphunyezwa kuphela ngomhla wokuphelangexesha amaMelika nanini na. Oko kukuthi, ukuba nangasiphi na isizathu umthengi angakufumana kunenzuzo enkulu ukuyenza kwangaphambili, kwicala lethu njengabathengisi siya kuba noxanduva lokuthengisa izabelo kwixabiso logwayimbo ngaphambi kokuphelelwa. Umzekelo unokuba kukho ulwabiwo lwesahlulo ngexesha lokusebenza. Umthengi weFowuni angabona ukuba izabelo ziyehla ngexabiso ngaphandle kokuxhamla, ke ukuba ipremiyamu ehlawulweyo incinci, ekugqibeleni unokusebenzisa ilungelo lakhe.
Ikwabizwa ngokuba yi-Put Protectora ngeSpanish, esi sicwangciso-nkqubo sinokhetho lubandakanya ukuthengwa kukaPut ngokuthenga indawo kwizabelo. Ngale ndlela, ukuba siyakholelwa ukuba ixabiso esinalo liyakhula, kodwa linokubandezeleka lokwehla okubonakalayo kwaye sifuna ukuzikhusela ekuweni, Esi sicwangciso silungile. Ngale ndlela, siya kuba nelungelo lokwenza ukhetho lwe-Put ukuze sikwazi ukuthengisa izabelo zethu ngomhla wokuphelelwa lixabiso eliphezulu kwimeko apho ukuncipha kuyakwenzeka.
Isicwangciso-qhinga seStraddle sesinye sezicwangciso ezinokhetho lwezezimali apho kungafuneki ukuba zithengwe izabelo. Inxalenye elungileyo yesi sicwangciso kukuba singasiphumeza lo gama nje sicinga ukuba sinezizathu zokukholelwa ukuba kuyakubakho ukuguquguquka okuninzi okanye okuncinci. Kule nto, zimbini iintlobo zeStraddle, ende (okanye ethengiweyo) kunye nemfutshane (okanye ethengisiweyo)
Umtya omde / Thenga
IStraddle ekuThenga siqulathe ukuthengwa ngaxeshanye, ngexabiso elifanayo lesiteleka, kunye nomhla wokuphelelwa kukhetho lokufowuna kunye nolunye u-Put ukhetho. Umahluko unokuvela, njengokuthenga ngaphandle kwemali kwaye ke unciphise ixabiso leprimiyamu.
Esi sicwangciso sisetyenziswa xa kuthathelwa ingqalelo ukuba kuya kubakho ukungazinzi okuninzi kwaye ixabiso liya kuthatha ukomelela okuqinileyo okuya phezulu okanye ezantsi, kodwa oko kungaziwa. Ukuba iphantsi, ukhetho lokubeka luya kuhlaziya, ngelixa liphezulu, iya kuba lukhetho lweFowuni oluya kunyusa ixabiso. Ke imeko elindelweyo kukuba ixabiso lithatha umkhombandlela onamandla.
Iindleko zalo msebenzi yipremiyamu kuzo zombini ezi ndlela zokhetho, ngenxa yoko eyona meko imbi iya kuba lixabiso lesabelo sokuhlala singanyanzelekanga ngomhla wokuphelelwa. Besiya kuphulukana neeprimiyamu kungakhange kubekho naliphi na ithuba lokuzithomalalisa.
Umtya omfutshane / ukuthengiswa
IStraddle esithengiswayo ayifani neyangaphambili, ifayile ye- ukuthengisa ngaxeshanye kweFowuni kunye nenketho yokubeka ngomhla ofanayo wokuphelelwa lixesha kunye nexabiso lesitrayikhi. Phakathi kwezicwangciso ezinokhetho lwezezimali, le yenye yezona zinobungozi. Ngokwesiqhelo ipremiyamu kulindeleke ukuba ihlawulwe ngelixa ukuhla okuncinci kwixabiso lezinto ezilindelekileyo kulindeleke. Nangona kunjalo, eyona meko imbi kakhulu iya kuba kukuhamba okunamandla kakhulu kwexabiso kwelinye icala. Oku kuya kuguqulela kwilahleko enkulu kakhulu ukuba oku kunokwenzeka. Ngokomntu, andizange ndisebenzise esi sicwangciso, ngenxa yengozi ebandakanya. Kwinto endiyivezayo le indlela yokusebenza ngakumbi yeenjongo zemfundo kunokuba njengengcebiso.
Ukuba unomdla wokuqhubeka nzulu ngamacebo amatsha ngokhetho lwezezimali kunye nolunye olunzima ngakumbi, awunakuphulukana nenxalenye yesibini!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Amaqhinga okhetho lwezezimali, Icandelo 1